Video:-Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo booqasho kadis ah ku tagay Gudaha Somaliya – Idil News
Video:-Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo booqasho kadis ah ku tagay Gudaha Somaliya
Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyata ayaa maanta booqday magaalada Dhoobley ee Gobolka jubada hoose oo ay kusoo dhaweeyeen ciidamadiisa ku sugan,majiro mas,uul Soomaaliyed oo la socday sida aad sawirka ka aragtaan ama goobjoog ka ahaa iyo dowlad ka war qabta toona.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inuu madaxweynuhu la kulmay ciidanka Dowladda Kenya ka jooga halkaas oo uu uga mahad celiyay naf hurnimada iyo howlaha ay dalkooda u hayaan.
Kenya inkastoo aan deris nahay hadana waxaan nahay laba Dal oo daris ah oo laba xuduuudood kala leh,isla markaana muran dhanka baddda iyo Bariga ahi ka dhaxeeyo,
Hadaba Gudaha Somaliya jooga ciidan ay iskeed usoo dirsatay Dawlada Kenya,balse markii danbe qaatay magaca AMISOM.
Dawlada Fadaraalka Somaliya ayaan ilaa iyo hada ka hadlin xadgudubkaas Madaxweynaha Kenya ku kacay.hoos ka daawo muuqaalka.
Dhanka kale qoraal kasoo baxay madaxtooyada Dawlada Kenya waxaa uu u ekaa in Kenyata maanta booqday dalkiisa magaalo kamid ah:-
Be the first to comment on "Video:-Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo booqasho kadis ah ku tagay Gudaha Somaliya"